Wareysigii ugu horeeyay oo ay bixisay gabadha ugu da’da yar Aqalka Hoose ee Baarlamaanka | Baydhabo Online
Wareysigii ugu horeeyay oo ay bixisay gabadha ugu da’da yar Aqalka Hoose ee Baarlamaanka
Ikraan Aadan Absuge, ayaa waxaa loo aqoonsaday in ay tahay Xildhibaanadda ugu da’da yar Xildhibaanada Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya.
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka uu waqtigiisu dhammaaday, ayaa Talaadadii sheegay in Ikraan Aadan Absuge ay noqoneyso Xildhibaanadda ugu da’da yar Aqalka Hoose.
Ikraan Aadan Absuge oo wareysigii ugu horeeyay siisay BBC, ayaa sheegtay in markii ugu horeysay ay tahay in Qur’aanka Kariimka lagu dhaariyo, isla-markaana ay qabtay walwal badan.
Ikraan Aadan Absuge, ayaa sidoo kale sheegtay in markii ugu horeysay ay noqoneyso inay xil qabato, horeyna ay u ahayd ardayad baratay Kulliyadda Maamulka iyo Maaraynta.
Mar la weydiiyay da’deeda, ayaa waxay ku sheegtay in ay tahay 26 jir. Su’aal ahayd in ay xaas tahay iyo in kale, ayay sheegtay inay tahay marwo reer dhaqanaysa.
Su’aal kale oo ahayd waxa ay fillan karto, maadaama da’ yaraan ay xilkan ku qabatay, ayaa waxaa ay sheegtay in shaqada hortaallaa ay tahay mid adag, balse ka dumar ahaan ay doonayan in is bedel ku hogaamiyan dalka.
Maadaama Odayaasha Dhaqanka Beeluhu ay inta badan dumarka ka hor joogsadan in ay ku metelan jegooyinka dowladda, ayaa Ina Absuge wax laga weydiiyay wixii ay kala kulantay Odayaasheeda Dhaqanka iyo weliba ergadii soo dooratay, waxaana ay sheegtay ka shakhsi ahaan inaysan wax diidmo ihi kala kulmin, ayna taageereen markii ay isa soo sharaxday.